Sida Loogu Diiwaan Galiyo Wareysiga Podcast-ka Skype | Martech Zone
Waxaan hadda haysannay labo ka mid ah wareysigeenna Khabiirka ee taxanaha ah Podcast-keena oo si la yaab leh ayey u dhacday. Waxaan horey u haysanay Edge-ka Webka Raadiyaha taas oo ah guul iyo wada shaqeyn lala yeeshay la-hawlgalayaashayada Istaraatiijiyada Goobta. Mararka qaarkood, in kastoo, waxaan dooneynay inaan dhab ahaantii qoto dheer ku qaadanno an khabiir halka EdgeTalk diiradda saarayo a mowduuca.
Iyada oo khubaro waddanka oo dhan leh, waa wax aan macquul ahayn in la isku dheellitiro jadwalka qof walba si loo helo istuudiyaha wareysiga, in kastoo! Waxaan go'aansanay sida ugu wanaagsan ee tan loo sameyn karo waxay ahayd inaan ka dhigno mashruuc dhinac ah oo aan u adeegsanno Skype iyo Garageband si aan u wada wada jiidanno. Waxaan ka codsanay caawinta hormoodka Brad Shoemaker Studios Zombie hal abuur leh si loo dhiso xayeysiiskeena, intros iyo outro. Brad xitaa wuxuu isticmaalay koox saaxiibkey ah, Ku biir Dadka dhintay, muusigga asalka ah!
Kadib waxaan tijaabinay farabadan hababka duubista wicitaanka oo runtii waxaan ogaanay in duubista wicitaanka Skype ay ahayd habka ugu fudud. Waan helnay Wicitaan Wicitaan oo loogu talagalay Skype ka soo wac Ecamm waxaa lagu arkay lacag hal mar ah oo ah $ 29.95! Rikoodhka ayaa soo baxaya oo si otomaatig ah u bilaabayaa wicitaan kasta - duubista fiidiyowga iyo maqalka labadaba. Marka - haddii aad rabto, waad sameyn kartaa wareysiyada fiidiyowga sidoo kale!
Waxaan sidoo kale tijaabinay tan makarafoonada iyo qaabka ugu fudud uguna wax ku oolsan ee aan soo helnay ayaa si fudud u isticmaalaya Logitech ClearChat Raaxada / Dhagaha USB. Waxay umuuqataa markasta oo aan maqlo codka ka soo baxa dadka ku hadla shaashadda, runti waxay khalkhal galineysaa duubista sidaa darteed waxaan isticmaalaa headset.
Tallaabada xigta waa inaad u soo jiido duubista Garageband. Waxaan si fudud ugu jiidayaa feylka track ka dibna waxaan helayaa dhamaan codka aan doonayo inaan ka saaro anigoo wadada u kala qaadaya isla markaana tirtiraya codadka aan loo baahnayn. Ka dib waxaan soo dhoofiyaa maqalkeena maqalka, xayeysiinta, iyo dibedda. Waxaan u kala jaray wadada meesha aan rabo xayeysiinta inay aadaan oo aan jiido mid kasta oo ka mid ah dhawaaqyada ku jira wado kasta si aan si sax ah isugu dul maro midba midka kale.
Sababtoo ah saldhigga macaamiisha ballaaran ee aan ku dhisnay BlogTalkRadio, Waxaan ku martigelinaa oo ku dhiirrigelinnaa barnaamijkayaga 'podcast' halkaas oo aan ugu qaybinnaa iTunes, Stitcher, iyo meelo kale oo badan. BlogTalkRadio waxay leedahay istuudiyaha u gaarka ah laakiin waa waqti-dhab ah, duubis toos ah oo aan lahayn qaab lagu xaliyo arrimaha maqalka. Waxaan halaagnay boodhadh badan oo isku dayaya in ay iyaga toos u qabtaan!
Waa kuwan natiijooyinka:
Wareysiga Drew Burns
Scott Brinker Wareysi
Hal qoraal oo ku saabsan tan - markasta oo aan u muuqdo inaan ku fiicanahay tan GarageBand, waxay beddelayaan Isdhexgalka iyo qaababka. I wad aniga!
Tani way kufiican tahay hadda. Brad iyo aniga waxaan fiirineynaa mustaqbalka meesha aan dhab ahaan ku soo qaadan karno qalab goobta iyo dhacdooyinka - Bradna wuxuu qasi karaa maqalka oo wuxuu hubin karaa heerarka saxda ah ee fog ee istuudiyokiisa. Waxay noqon doontaa xoogaa maalgashi, laakiin asal ahaan waxay na siin doontaa istuudiyaha la qaadan karo oo aan ku isticmaali karno meel kasta - xafiiskayaga ama xarumaha shirarka qaarkood. Ilaa iyo inta aan leenahay xawaare ballaadh ah, waxaan awoodi doonnaa inaan meel isugu geyno xirfad-yaqaan 'podcast' ah.
Tags: timo kabayaremiisaaniyaddaistuudiyaha zombie hal abuur lehshabakadda ecammgaraashkaSuuqgeynta Suuqgeyntaqas podcast ahwareysiyada Podcastdiiwaanka duubistaduubo skypeduubo wareysiga skypeduubo skypeduubista skype